အမျိုးသမီးများနှင့်ပရောပရည်မလုပ်မီယောက်ျားများသိစေချင်သည့်အရာ - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
ချာလီ Clickman, အရွယ်ရောက်လိင်ပညာပေးခွငျးအားဖွငျ့
နောက်ပိုင်းတွင်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်မြင်ကွင်းများအတွက်အရေးပါတဲ့အပြောင်းအလဲရှိခဲ့သည်ရဲ့။ အဆိုပါ kink ကမ်ဘာပျေါတှငျ, ဘုရားမဲ့ဝါဒစက်ဝိုင်းထဲမှာအမျိုးသမီးရှေးရှေးနှင့်၎င်းတို့၏မဟာမိတ်များအကြား, အယူမှားလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကျနော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်, ချေမှုန်းရေး, နှောင့်ယှက်, မလိုချင်တဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အခြားဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ၏ဆိုးကျိုးများအကြောင်းပြောနေတာမတိုင်မီအစဉ်အဆက်ထက်ပိုပြီးလူတွေကိုမြင်လျှင်ခဲ့ကြရတယ်။ သင်တန်း၏, ဤအမှုတစုံတခုကိုမျှအထူးသဖြင့်အသစ်ဖြစ်၏နှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ကထိုသို့အကြောင်းပြောနေတာပါပြီ။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ကွဲပြားခြားနားရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၏သဘောသဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းမတို့အားမဟာမိတ်များဖြစ်လိုသူကပိုယောက်ျားတက်စကားပြောနေကြသည်ကို၎င်း, အင်တာနက်အလားအလာနှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်မှကျေးဇူးတင်စကား, နောက်ထပ်လူအစဉ်အဆက်မတိုင်မီထက်ပုံစံများကိုမြင်လျှင်နေကြသည်။ အဲဒီမှာပြောကြီးမြတ်ပစ္စည်းပစ္စယအမြောက်အမြားနှင့်အတူရှေးရှေး၏ပဒေသာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါကဒီမှာသူတို့၏စကားပြန်လုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းမခံစားရဘူး။ အဲဒီအစားငါအများကြီးအဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောငါလုပ်ခဲ့တယ်ထက်နားလည်သဘောပေါက်င်ဆန္ဒရှိကြောင်းအရာတစ်ခုခုဖြေရှင်းချင်တယ်။
ငါသည်လူကနေမြင်ရပါတယ်ဒီကြီးထွားလာအသိအမြင်ဖို့တုံ့ပြန်မှုအတော်များများဟာသူတို့နဲ့အတူခရုဇ်ပရောပရ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့တစ်စုံတစ်ဦးကဆွဲဆောင်မှုကြည့်ဖို့ဖြစ်ပျက်အခါတိုင်းအမျိုးသမီးတွေကောက်ဖို့ကြိုးစားမမကျေနပ်မှုအချို့ကိုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ လူတို့သညျမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကျနော်တို့ချင်ဘယ်အချိန်မဆိုဖော်ပြနိုင်မှာသင့်ကြောင်းနောက်ခံယူဆချက်ဖယ်ချန်ထား, ငါလှည့်ပတ်ရဆုံးယောက်ျား၏အထွေထွေ clueless အကြောင်းပြောဆိုချင် အဆက်မပြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော် အမျိုးသမီးအများစုအတွေ့အကြုံနှင့်ပရောပပေါ်မှာရှိပြီးသောဆိုးကျိုးများဖြစ်သည်။
ကျွန်မအထူးမျှော်လင့်ချက်တစ်ညဥ့်ရပ်တည်ချက်တစ်ခုကြားဆက်ဆံရေး, တစ်ဦးစကားပြောဆိုမှု, ရက်စွဲတစ်ခုအဘို့ဖြစ်၏ရှိမရှိ, အမျိုးသမီးများနှင့်အတူပရောပရန်, သို့မဟုတ်ရိုးရိုးအချိန်ကိုသွားချင်သူယောက်ျားအဘို့ဤစာရေးတာပါ။ အဘယ်အရာကိုရည်ရွယ်ချက်, နှောင့်ယှက်ညှာ, ဖြစ်စရာ, ဒါမှမဟုတ်အမြိုးသမီးမြားထံမှမဆိုအခြားတုံ့ပြန်မှုရဖို့အခါဖြစ်ပျက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားရာဖြစ်၏။ သို့သော်လက်ျာဘက်ရှိ, ထိုပြဿနာကိုအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချိန်ကာလ၏တစ်ဦးကအများကြီး, ကခက်ခဲလျှင်မရမဖြစ်နိုင်ဘူးအဆိုပါခြားနားချက်ကိုပြောပြရန်။ ဒါကအမှန်တကယ်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူချိတ်ဆက်ချင်သူယောက်ျားတွေအဘို့ယူတာပဲ။ ထိုအသင်သည်အဘယ်အရာကိုသိသလော အဖြစ်တာကသင်နှင့်ငါ့အဘို့ယူတာပဲကြောင့်မိန်းမတို့အဘို့များစွာသောအကြိမ်ပေါင်းများစွာပိုမိုဆိုးရွားပါတယ်။ ကျနော်တို့ဒီအခြေအနေကိုသို့မဟုတ်မဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်နှောင့်ယှက်ရသောကြောင့်, အမြိုးသမီးမြားကိုရှေးခယျြမရကြဘူး။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ဝှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ခြုံဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအရာအမြိုးသမီးမြားကိုဤသည်ငါတို့အဘို့မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်သောအခါကြှနျုပျတို့ခံစားရပုံကိုများအတွက်ကိုယ်ချင်းစာရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့ sprained လက်ချောင်းတယ်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုများအတွက်ကိုယ်ချင်းစာရှိသည်ဖို့ကျိုးခြေထောက်နှင့်အတူတစ်ယောက်ယောက်ကိုမျှော်လင့်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ကြောင်း။ သူတို့က bandwidth ကိုနှင့်အကျိုးစီးပွားရှိပါကကြီးဖြစ်ပါတယ်! ဒါပေမဲ့သူတို့မကျင့်ကြသောအခါထိုသူတို့ resenting အထောက်အကူဖြစ်စေမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့အမျိုးသမီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို coddle နှင့်ကိုယျ့ကိုယျကိုအဘို့ထိုသူတို့ဂရုစိုက်ဖို့မျှော်လင့်ရပ်တန့်ဖို့လိုပါတယ်။
ပို. အရေးကွီးသျောတစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်နေမကောင်းရည်ရွယ်ချက်ယူဆသည့်အခါစိတ်ပျက်ရတဲ့မကူညီဘူးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါကနှိပ်စက်တာကိုငါသိ၏။ သင်တို့ကိုငါတကယ်ကျယ်ပြန့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောနှင့်မဆုတ်မနစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏သက်ရောက်မှုကိုနားလည်မဟုတ်လျှင်သူကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရယူရန်လွယ်ကူမယ့်နားလည်ပါသည်။ ဒါကကျနော်တို့အများဆုံးအမျိုးသမီးများကိုပစ်မှတ်အဖြစ်ကမ္ဘာကမှတဆင့်ရွေ့လျား၏, စိတ်ခံစားမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုနှင့်အတူဆက်ဆံနေကြတယ် get- ဖို့လိုအပ်သောအရာပါပဲ။ ဒါဟာသူတို့ကိုကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်များယောက်ျားတစ်ယောက် flirts သို့မဟုတ်တစ်ပြောင်းရွှေ့စေသည်အခါတိုင်းယူဆမျှော်လင့်ဖို့တရားမျှတတဲ့သို့မဟုတ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါဘူး။ ငါအမှုမဟုတျကွောငျးအရာတစ်ကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျဖို့ကိုချစ်မယ်လို့ကျနော်တို့အဲဒီမှာနထေိုငျပါဘူး။ ကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြောင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်အလုပ်မလုပ်ပေမယ့်သူတို့ကိုကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်များယူဆရန်အဘို့အကဘေးကင်းလုံခြုံမယ့်လျှင်အဖြစ်အမျိုးသမီးများကိုလုပျဆောငျဖို့မျှော်လင့်ထားပါဘူး။ သူတို့ရဲ့အတှေ့အကွုံမဟုတ်ရင်ကပြောပါတယ်။ ယောက်ျားအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်မိန့်ခွန်းနှင့်မုဒိမ်းမှုသို့မဟုတ်လူသတ်မှု၏ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်အတူလူကိုယ်တိုင်ထွက်ပြင်းထန်စွာဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါ, အဲဒီအမျိုးသမီးတွေသူတို့ခုခံကာကွယ်ဖြစ်စမတ်နေသည်ကိုသင်တို့သိပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်လုပ်နေလုပ်နေလျှင်, သင်ထိုပြဿနာမှပံ့ပိုးပါတယ်။ ရပ်။ အခုတော့။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမှသင်ခန်းစာယူစရာရှိသည်။ ကုမ္ပဏီများသည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချသောအခါ၎င်းတို့အောင်မြင်သောမြှင့်တင်ရေးကိုမည်သို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်သည့်အရာ၏အစိတ်အပိုင်းမှာအလားအလာရှိသောဖောက်သည်များကမည်သည့်ချဉ်းကပ်ပုံကိုလက်ခံမည်ကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာန၊ အုပ်ချုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများသို့မဟုတ်အိုင်တီပညာရှင်များကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရာတွင်ထိရောက်မှုရှိမရှိအရေးမကြီးပါ။ တစ်ခုတည်းသောသက်ဆိုင်ရာမက်ထရစ်ဆိုသည်မှာ၎င်းသည်ပစ်မှတ်ထားပရိသတ်မှ၎င်းအား၎င်းတို့မည်သို့တုန့်ပြန်သည်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ သင်၏ပရောပရည်ပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိပါကသင်ချဉ်းကပ်ရန်သင်ကြိုးစားနေသည့်အမျိုးသမီး၏အမှားမဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ချဉ်းကပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထိုအချိန်တွင်ထိုလူအတွက်အလုပ်မလုပ်သောအရာတစ်ခုရှိသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမှသင်ခန်းစာယူပြီးတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အပြစ်တင်ခြင်း၊
ဆိုလိုသည်မှာအခြားလူငျသညျရိပ်မိပုံကိုသတိပြုမိဖြစ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သငျသညျမညျသူမဆိုထိခိုက်စေဘယ်တော့မှမညျ့သူတစ်ဦးကြောက်မက်ဘွယ်ကောင်လေးဖြစ်လိမ့်မယ်။ သို့သော်သင်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးတွေပါပဲ, သို့မဟုတ်သင်သူမ (အနေနဲ့ဓာတ်လှေကားများကဲ့သို့သို့မဟုတ်တစ်လေယာဉ်ပေါ်) ကွာမရနိုငျသညျ့တစ် setting ကိုရောက်နေလျှင်သင်, (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်လုံ့လရှိသူ) အာကာသတွေအများကြီးတက်ယူလျှင်, သင် '' သင်သည်သင်၏ချဉ်းကပ်မှုပိုမိုနူးညံ့သိမ်မွေ့နေလျှင်ပိုကောင်းလုပ်ပေးကြည့်။ သူတို့အမှုအရာတို့ကိုအဘယ်သူမျှမဟုတ်မှန်သောစကားဖြစ်၏ရင်တောင်ပိုပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့ဖြစ်ခြင်းကြိုးစားကြောင်းသင်တို့အဘို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပါ။ သူက "ရိုးရာ" ကျားမအခန်းကဏ္ဍဆန့်ကျင်သွားနေစဉ်, ကအလုပ်လုပ်စေသည်ယျ။ ပုံမှန်အတိုင်းကျားမအခန်းကဏ္ဍပထမဦးဆုံးရာအရပျ၌ဤရှုပ်ထွေးသို့ကျွန်တော်တို့ကိုရတယ်အတိအကျဘာတွေလုပ်နေလဲ။
ငါကြောင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပါပဲကြောင်းပေးထားငါကြောင်မဟုတ်ဘဲအိပ်ရာအောက်မှာကနေထွက်ဆွဲကငါ့ကိုကိုက်တတ်ခြင်းနှင့်ကွာပြေးလာသောအခါအမျက်ထွက်လာပြီထက်, ငါနှင့်အတူပါထိုင်လာချင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဖိတ်ခေါ်ငါ၏အပေါင်အောင်ပြုလုပ်၏ထင်ပါတယ်။ သေချာတာပေါ့, ကျပန်းလူတွေကသူတို့ကိုကောက်သည့်အခါကကြိုက်နှစ်သက်သူအချို့ကြောင်ရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်ကိုမုန်းသူအခြားကြောင်မှားဘာမှရှိမယ့်မဆိုလိုပါ။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးရန်လိုချဉ်းကပ်မှုထက်ပိုပြီးကြောင် s မှာအလုပ်လုပ်တယ်ဒါ effective- ဖိတ်ခေါ်ခံရစေသည်အပေါင်းတို့နှင့်တကွမှာသင့်ရဲ့အာရုံကိုမလိုချင်ကြဘူးသူမည်သူမဆိုနာကျင်ရတဲ့မပါဘဲမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လမ်းကိုသွားနိုငျသောအရာတစျခုပါပဲ။ ကြောင်တစ်ကောင်လိုက်ဖမ်းကြောင့်သင်တို့နှင့်အတူအလုံခြုံမယ့်ကစည်းရုံးသိမ်းသွင်းသွားမပေးပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒ၏ရလဒ်ကိုရန်သင့်ပူးတွဲမှု၏သွားလာရင်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်နည်းလမ်းများဖိတ်ခေါ်ပြုလုပ်ခြင်း။ သင်သည်မည်သည့်အထူးသဖြင့်ရလဒ်မျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်သည့်အခါ, သငျသညျကိုယျတိုငျကိုကယူပြီးမပါဘဲမည်သည့်ပြန်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စတိကျတဲ့အမြိုးသမီးတတုံ့ပြန်ပုံကို, သင်သင့်အကြောင်းအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောအရာကိုအကြောင်းကိုကောက်ချက်မှခုန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အဲဒီမှာတစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်မခံချင်မရစေခြင်းငှါ, အကြောင်းပြချက်အများကြီးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ထဲကအတော်များများကယ့်ကိုသငျနှငျ့အတူလုပ်ဖို့ဘယ်အရာမျှရှိသည်။
နှင့်သူ့ဟာသူ၏, ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကစကားဝိုင်းခံစားနည်းလမ်းများဖိတ်ခေါ်ပြုလုပ်ခြင်း။ ကြောင်းတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူသငျသညျရှိသည်သာအပြန်အလှန်ဖွင့်ရင်တောင်ကြောင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုမသွားခဲ့ဘူးကြောင်းမဆိုလိုပါ။ အောင်မြင်မှုအကောင်းတစ်ဦးကွန်နက်ရှင်ထက်အခြားဘာမှကိုဆိုလိုသည်သောအယူအဆ၏သွားကြကုန်အံ့။ အခြားအရာတစ်ခုခုမှဦးလမ်းပြလျှင်, ပျော်စရာရှိသည်! သင်တို့မူကားတစ်ခုသာအဆုံးသတ်နည်းလမ်းများထက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ပျော်စရာတစ်ခုခုအဖြစ်ပရောပစဉ်းစားလျှင်မူကား, သငျသညျစိတ်ပျက်မိကြောင်းနှင့်မကျေနပ်မှုများအတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်တက် setting ပါတယ်။
ကိုယ့်ဟာကိုယ်အနာဂတ်ငွေပမာဏသည်၌သင်တို့၏စွမ်းအင်နှင့်အချိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနည်းလမ်းများဖိတ်ခေါ်ပြုလုပ်ခြင်း။ တစ်စုံတစ်ဦးကအခုအချိန်မှာမရရှိနိုင်ပါသို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားမယ့်လျှင်, သင်အနာဂတ်ချိတ်ဆက်မှုအတွက်အခန်းထဲမှာထားခဲ့နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်အင်ဖိုအတွက်တောင်းဆိုနေတာသို့မဟုတ်ကြှနျမမျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲငှေပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းသူမ reply လိမ့်မယ်, ဒါမှမဟုတ်သင်သည်အခြားပါတီမှာသူမ၏သို့ပြေးပါလိမ့်မယ်။ သူမကိုသင်ပြီးသားကိုသိသူတစ်ဦးဦးရဲ့လျှင်သင်သည်နောက်တဖန်သူမ၏တွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ သူမ၏ချွတ်ဖိအားကိုယူနှင့်သင်အများကြီးပိုငျသညျချင်သောတုန့်ပြန်ရဖွယ်ရှိပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘယ်လိုမှ သိ. နည်းလမ်းများဖိတ်ခေါ် Making တစ်ဦးဖိတ်ကြားချက်ကိုပူဇော် ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသင်သူမ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုတန်ဖိုးထားနှင့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ကြောင်းစေသည်။ "သင်စိတ်ဝင်စားနေလျှင် ... " နှင့်အတူချွတ် Start နှငျ့သငျရာပူဇော်သက္ကာကိုဖွင့်အဘယျသို့အတူတက်လိုက်နာပါ။ သင့်ရဲ့သူမ၏အကျိုးစီးပွားသင်တို့အဘို့တစ်လိုအပ်ချက်ကြောင်းသရုပ်ပြပါ။ တက်ကြွစွာမိမိတို့၏အလိုဆန္ဒများအဘို့မိန်းမတို့ကိုအရှက်ခွဲတတ်၏, ထိုသူတို့၏ခွင့်ပြုချက်ဆီလျှော်ကြောင်းသူတို့ကိုပြောထားသည်တစ်ကမ်ဘာပျေါတှငျ, တစ်အစွမ်းထက်အရာဖြစ်နိုင်ပြီးသင်မှတ်မိစေပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနည်းလမ်းတစ်စုံတစ်ဦးနဲ့စကားရှိသည်နိုင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်သင့်ဆွဲဆောင်မှုသိပ်သင်သည်အာရုံခွင့်မပေးဖိတ်ခေါ်ပြုလုပ်ခြင်း။ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအဖြစ်, အမျိုးသမီးရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအကဲဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲလမ်းပေါ်ကိုဆင်းလမ်းလျှောက်စမ်းပါ။ အဲဒီမှာတော်တော်လေးလူတွေကိုကြည့်မှားဘာမျှမရဲ့, ဒါပေမယ့်သင်တစ်စုံတစ်ဦးအကြောင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်အားလုံးသင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံသို့မဟုတ်မင့်ရှိမရှိအခါပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားတွေ၏တစ်ဦးကအများကြီးဒီတော့သူတို့ကအတိတ်ကာလကိုမြင်ရနိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးသွားမယ့်တော်တော်မျက်နှာတစ်ခုသို့မဟုတ်ပူခန္ဓာကိုယ်များအတွက်လူအစုအဝေးစကင်ဖတ်ဖို့ရန်အသုံးပြုရ။ ထိုသို့လုပ်နေတာနဲ့အဲဒါကိုအများကြီးပိုလွယ်သည်သင်၏အလိုဆန္ဒ၏ရလဒ်ကိုရန်သင့်ပူးတွဲမှု၏သွားကြကုန်အံ့စေပါလိမ့်မယ်မဟုတ်လေ့ကျင့်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ရုံ clear- ဖြစ်ငါကကြည့်ဖို့ပြဿနာတစ်ခုဖွင့်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသင်တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ cleavage သို့မဟုတ်အခါသင်ဂရုစိုက်အားလုံးသင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကပူသည်ထင်ခြင်းရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်ထွက်စစ်ဆေးနေခြင်းမရှိဘဲမျက်လုံးချင်းထိန်းသိမ်းရန်မနိုင်သည့်အခါပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်တစ်ယောက်ယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားမသိရှိပါကသူသည်သင်၏တိုးတက်လာဖို့တုံ့ပြန်မှုမယ့်သည်မှန်လျှင်, အံ့သြသွားဖြစ်ပါဘူး။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘယ်လိုသင်ယူနည်းလမ်းများဖိတ်ခေါ် Making သင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲ အစားကကျော်ယူခွင့်၏။ ဒါဟာဆိုလိုတယ် ဒါဟာကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောခံစားရနိုင်သည်ကိုလက်ခံ, ထိုငျသညျဘယျအရာကိုဆိုလိုမဟုတ်ဘူးလျှင်ပင်။ ဒါဟာတစ်စုံတစ်ဦးထိခိုက်ဘို့တောင်းပန်နိုင်ဖြစ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမဟုတ်ခဲ့လျှင်ပင်။ ဒါဟာအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အသုံးမပြုနိုင်သည့်၏တစ်စုံတစ်ဦး၏မရှိခြင်းနားလည်ခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ် သေချာပေါက်ကိုသင်တစ်ဦးငြင်းပယ်ခံရမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ခံစားမှုထောက်လှမ်းရေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လုံ့လရှိသူ Self-စည်းမျဉ်း, သင်ယူခြင်းနည်းလမ်းဖိတ်ခေါ်ပြုလုပ်ခြင်း။
လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်အလုပ်ပရောပ၏ဤမျိုးလိမ့်မည်လော ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ မတူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေအများကြီး, သင်လုပ်နေတာနှင့်သင့်လျော့နည်းရန်လိုချဉ်းကပ်အကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်သင်ထိုသူတို့အဘို့အလုံအလောက် macho မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မရှိခြင်းလက္ခဏာလို့တော့ထင်နေတဲ့အဘယျသို့နားလညျမှုလှဲမှားမည်သူအမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့အတှေ့အကွုံမြား၌, ကုန်ချင်းလဲလှယ်ခြင်းကြောင့်ရကျိုးနပ်သည်နှငျ့သငျဝေးနည်းပါးလာခုခံကာကွယ်, အမျက်ထွက်တုံ့ပြန်မှုရလိမ့်မယ်။ နှင့်သင်အမှန်တကယ်ကလေးစားမှုတစ်ခုအုတ်မြစ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည့်အခါသင်လိုချင်တာတွေရဖို့ကပိုများပါတယ်။
အကြောင်း, သော်လည်း, ကသောကျားမအခန်းကဏ္ဍနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနည်းလမ်းများပြောင်းလဲရန်မှစတင်သည်ကြောင့် ပို. ပင်အရေးကြီးသောသော။ ဒါဟာလိင်အကြားစစ်ပွဲ၏သံသရာနို့တိုက်ကျွေးမှုရပ်တန့်ဖို့အချိန်ပါပဲ။ ထိုအဟုတ်ကဲ့, ကျနော်သူတို့လွန်းသောအကြောင်းကိုအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်အကြောင်းကိုအမျိုးသမီးတွေဆိုအများကြီးရှိသည်။ သို့သော်လည်းငါသည်အမျိုးသမီးတွေဒီတစ်ခုအပေါ်ပထမဦးဆုံးအပြောင်းအရွေ့စေရန်မျှော်လင့်ထားရန်ဆန္ဒရှိဘူး။ သူတို့ကပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုယူတောင်းဆိုဖို့ထက်အပြင်ကသငျသညျအခြားလူများလုပ်ချင်သောအရာကိုပုံစံပိုပြီးထိရောက်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင်ငါသည်သင်တို့ကို (ဟုတ်, သင်!) သင်လိုချင်သောလိင်နှင့်မတ်ေတာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်ချင်တယ်။ သင့်ရဲ့ပရောပကပြွီးနှင့် int ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းရရှိထားသူအမျိုးသမီးအများစုကြုံတွေ့ကြပြီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များနှင့်ချေမှုန်းရေး၏သမိုင်းနှင့်နက်ရှိုင်းစွာအရိုးစွဲနှင့်အလုပ်မဖြစ်ကျားမအခန်းကဏ္ဍသူတို့ကိုပိုပြီးထိရောက်စေမည်အကောင့်ယူနည်းလမ်းများဒီလိုမြင်ကွင်း။
@LailaMickelwait ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုနှင့် ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းမှု ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖိုရမ်များမှ လူအများစုသည်… t.co/jkmgwPWUAO